Askarta Dowlada Oo Gaari Shacab Ku Rasaaseeyay Gobalka Hiiraan. – Bogga Calamada.com
Askarta Dowlada Oo Gaari Shacab Ku Rasaaseeyay Gobalka Hiiraan.
Askar ka tirsan kuwa dowlada Ridada waxey saacadihii lasoo dhaafay duleedka Magaalada Beledweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ku rasaaseeyeen gaari ay la socdeen dad shacab ah.
Maleeshiyaatka dowlada ayaa si gaar ah gaarigan ay dadka shacabka la socdeen ugu rasaaseeyay Tuulo ku dhawaad 7-KM u jirta magaalada Beledweyne,waxeyna rasaastaasi sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay dadkii shacabka ee gaarigaasi la socday.
Inta la xaqiijiyay rasaastaasi waxaa ku geeriyooday Hal ruux oo Haweeney ah waxaana ku dhaawacmay Labo ruux kuwaasi oo gabi ahaantooda ah dadkii shacabka ee la socday gaariga ay maleeshiyaatka Murtadiinta Rasaaseeyeen.
Gaarigan maleeshiyaatka dowlada ay rasaaseeyeen ayaa kasoo baxay magaaalada Muqdisho kaasi oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne,iyadoona maleeshiyaatka dowlada Ridada ay shaqo maalmeed ka dhigteen iney rasaaseeyaan dhacna u geystaan dadka iyo gaadiidka Safarka ah.